I-China Yenza i-Cover ecacileyo yemvula ye-TPU yoMvelisi wesikhwama kunye noMthengisi | Ngonaphakade
Iingubo zemvula zePolyester
I-PVC Raincoat kunye nePoncho
I-PE Raincoat kunye nePoncho
I-EVA Raincoat kunye nePoncho
I-PEVA Raincoat kunye nePoncho
I-poncho yemvula entle yangaphandle yabantwana ye-USD1.1-USD1.8
I-Raincoat yabantwana eneHood USD1.1-USD2.3
Banokulahlwa PE olungxamisekileyo imvula poncho USD0.12-USD0.3
Iiponchos zemvula ezinokuphinda zisebenze ezinokuPrinta kweLogo yesiqhelo
Yenza i-Cover ecacileyo yemvula ye-TPU ye-Handbag
Umzekelo No. LD-HC16
igama: Isikhwama semvula esikhusela imvula
materail: TPU PVC EVA ipholiyesta
ubukhulu: Umzimba: 45 * 32 cm okanye wena
umbala: mthubi / selubala / luhlaza / luhlaza / pinki / mhlophe okanye zilungelelanisiwe unokuprinta ilogo okanye ipateni
ukupakisha: 1pc / polybag; 100pcs / ibhokisi
Ngaba ukupakisha njengoko isicelo abathengi '.
phawu: Ukungena manzi, ngaphandle, kusefashonini
I-1.Hangdag raincoat ikhusela i-handbad kude nemvula nothuli
2.I-Hangdag nganye ye-raincoat ipakishwe ngokukodwa ukuze ihanjiswe ngokulula kumaqela amakhulu abantu.
3.Perfect yokuthenga, ukuzonwabisa, iipaki yokonwabisa, umculo imithendeleko
4.amanzi, apakishwe kwaye alula ukuze anele kwibhegi yakho okanye kwisipaji.
5.ightweight, compact, kunye nokugubungela okuhle.
6.zanele ngokwaneleyo ixesha elide. beka engxoweni xa ungasebenzisi
7.Kulunge kakuhle ukuba umsebenzisi angayolula kubungakanani / bebhegi yakhe.
Siphinde sivelise kwaye senze ngokwezifiso ezinye iintlobo zebhokisi yemvula njengoko ufuna.
Singaprinta ilogo (imibala emi-6, iimitha ezi-1 ubuninzi) ukuhlangabezana nemfuno yakho.
Egqithileyo Yenza ngokwezifiso i-TPU yemvula ecacileyo yesikhwama semali-ngunaphakade
Okulandelayo: Iiponchos zemvula ezinokuphinda zisebenze ezinokuPrinta kweLogo yesiqhelo
1.Q: Ifumaneka phi inkampani yakho? Ndingandwendwela apha?
A: Umzi-mveliso wethu ubekwe kwisiXeko saseShijiazhuang, kwiphondo lase-Hebei, China. Wamkelekile ukuba usityelele.
2.Q: Yintoni MOQ?
A: MOQ yethu 2000pcs / umbala. Ukuba umbala ezikhoyo, MOQ ezincinane nayo yamkelekile.
3.Q: Ngaba ndicela isampulu enye ngaphambi kwendawo yoku-odola?
A: Ewe, singakuthumela isampuli simahla, kodwa umthengi kufuneka ahlawule intlawulo ebonakalayo yesampulu, enje nge-DHL, TNT, FEDEX, UPS njl.
4.Q: Ngaba wenza logo elicwangcisiweyo?
A: Ewe, sinako ukwenza logo esingabizi kwaye ulandele umsebenzi wakho.
5.Q: Njani ngexabiso?
A: Kudala sivelisa i-raincoat malunga neminyaka elishumi elinesihlanu; Sinezinto ezininzi kwaye ixabiso liyakhuphisana. Uluhlu lwamaxabiso luvela kwi-0.12usd ukuya kwi-15usd / iziqwenga ngokwezinto ezahlukeneyo kunye noyilo.
6.Q: Yintoni intlawulo yakho? Singakuhlawula njani?
A: Singayamkela i-T / T, L / C, i-Western Union, intlawulo ye-Escrow, ukuba unazo naziphi na ezinye iimfuno zokuhlawula, nceda ushiye umyalezo ukuze uqhagamshelane nathi.
7.Q: Njani ngombala?
A: Imibala eqhelekileyo yeemveliso oza kuzikhetha ziBomvu, Mthubi, Luhlaza, Luhlaza, Phinki kunye nokungafihli ... Umbala wePantone unokukhethwa ukuba ubuninzi bufikelela kwi-MOQ.
8.Q: Njani ngexesha lokuhambisa?
A: Ngokwesiqhelo sinokulungiselela ukwenza unikezelo ngaphakathi kweentsuku ezingama-25 ukuya kwezi-35. Kuxhomekeke kubungakanani.
9.Q: Ngaba unayo nayiphi na isatifikethi semveliso oyenzayo ngoku?
A: Senze uvavanyo oluninzi kwiimveliso esizithengisayo ngoku. Njenge-SGS, BV, REACH, California 65. 6P yokuvavanywa simahla njalo njalo. Kwaye singenza ilaphu ll ngokwezicelo zakho, isampulu yemveliso inokuthi ithumele kuvavanyo ngaphambi kokuthunyelwa.
Idyasi yemazi yeLady Bag
ILadys Handbag Imvula yokugubungela
Isitayile esitsha seLadys Handbag esingaphezulu kweMvula
Custom okungangenwa Ukuphefumla Unisex Imvula Poncho ...
Heavy umsebenzi ipholiyesta camera PVC poncho imvula for ...
Yoshicilelo Full ipholiyesta Lightweight manzi ...
Iiponchos zemvula ezinokuphinda zisetyenziswe ezinokuLungiswa kweMpawu ...
Igolide yePolyester egobileyo yemvula ene-hood USD5.3 ...
Ukuqamba, ukusebenza, kunye nokuzalisekisa iimfuno zabathengi.
Lwedilesi:ICandelo 904-905, iSakhiwo se-Runxing, i-Nombolo 355 yesitalato i-Youyi eShijiazhuang, China
Abantwana Pu Imvula, I-Peva Raincoat, Abasetyhini beMvula, I-Pvc Imvula enqabileyo, IPvc Poncho, Pu Imvula,